China 48MM 100M Carton Sealing Tape fekitori uye vagadziri | Newera
Kushanda kwe48MM 100M Carton Kuisa Tepi:
Kuisa chisimbiso tepi kunonziwo bopp tepi, kurongedza tepi, nezvimwewo. Inoshandisa BOPP biaxially yakanangidzirwa polypropylene firimu sechinhu chepasi, uye zvakaenzana inoshandisa kumanikidza-inonamira inonamira emulsion mushure mekudziya fomu 8.μm-- 28μm. Yekunamatira dura chinhu chakakosha muhupenyu hwechiedza maindasitiri emakambani, makambani, uye vanhu vamwe nevamwe. Nyika haina chiyero chakaringana chematepi indasitiri muChina. Kune imwechete chete indasitiri yakajairwa "QB / T 2422-1998 BOPP yekumanikidza-inonamira tepi inonamira yekuisa chisimbiso" Mushure mekumanikidza kwepamusoro-corona kurapwa kweiyo yekutanga BOPP firimu, yakaoma nzvimbo inoumbwa. Mushure mekuisa iyo glue pairi, iyo jumbo roll inoumbwa kutanga, yobva yadimburwa kuita madiki madiki emhando dzakasiyana nemuchina wekucheka, inova iyo tepi yatinoshandisa mazuva ese. Chinhu chikuru chekumanikidza kunamatira emulsion isylone ester.
Pashure: Makambani Ekugadzira e gummed kraft tepi - Kudzivirirwa kwezvakatipoteredza uye anoshanda Kraft bepa tepi - Newera
Zvadaro: 72MM 200M Yakajeka Acrylic Kuisa Tepi